Kana iwe usinganzwisise zvakajeka madiki madiki uye anotendeuka mukodhi, iwe unozopedzisira uine zviputi mune yako application. Kana iwe uine kusahadzika, iwe unogona kubvunza kune vamwe yakazara-stack webhu vanogadzira.
Roma Kapadiya ndeye SEO Muongorori & Wekutaura Nhau kuNimblechapps - ayakasanganiswa app yekuvandudza kambaniYakabva kunze kweIndia. Iye anotenda mukushandisa nzira dzakasiyana-siyana kugadzira bhizinesi pamhepo kuvepo kunofadza uye kununura. Sekuvaraidza, anonyora nezve nyowani uye iri kuuya tekinoroji, kutanga, zvishandiso zvehurongwa, uye bhizinesi uye webhu dhizaini. Unogona kumutevera paTwitter neFacebook.